Iimenyu zecala ezili-9 kwiCSS ukuphakamisa iwebhusayithi yakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | CSS, Bugcisa
Los Iimenyu ezisecaleni zibalulekile namhlanje ukunikezela undwendwe ngezona zenzo zibalulekileyo ezimsa nakweyiphi na indawo yewebhusayithi yethu. Kungenxa yoko le nto sikuphathela uthotho lwebar esecaleni ezili-9 okanye imenyu esecaleni ye-CSS ukuze udityaniswe kwiwebhusayithi yakho kwaye ke ngokongeza iinombolo kumava omsebenzisi ngePC yakho.
Oko Amava omsebenzisi abalulekile Namhlanje kwi-smartphone okanye ithebhulethi kuba sisixhobo wonke umntu aphethe ngesandla. Ukufikelela kwayo ngokulula kuvumela abasebenzisi abaninzi ukuba banikezele ngeselfowuni endaweni yekhompyuter, ke kubalulekile ukuba newebhusayithi yethu ephendulayo. Olunye uluhlu lweemenyu, njengale esabelana ngayo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
1 Ibar esecaleni ephendulayo
2 Itemplate yebar esecaleni
3 Izikhombisi ezisecaleni
4 Ulawulo lwebar esecaleni
5 Ibha yecala
6 Imenyu esecaleni
7 Izixhobo ezisecaleni zokuhamba ngesixhobo
8 Icocekileyo yeCSS Fly
9 Ibar esecaleni Imenyu Hover
Ibar esecaleni ephendulayo
Este Imenyu esecaleni inika inkxaso ye-ARIA kwaye inokusetyenziswa kwimowudi yomfanekiso kunye nembonakalo yomhlaba. Ngoyilo olukhetheke kakhulu, luyazimela ngokwalo ukubonisa oopopayi abapholileyo kuFacebook, kunye noluhlu lwezinto ezihambisa phezulu ezisa oopopayi ngakumbi ukubeka yonke ipunch kuyilo lwewebhu.
Itemplate yebar esecaleni
Ithoni emnyama, le menyu yecala le-CSS ilungile inemibala ngenxa yombala zezaziso zakho kunye nendlela oopopayi bakho abalunge ngayo. Isebenzisa imenyu yokuhla esekwe kwiBootstrap, ke uya kuba nemigangatho yangoku yoyilo lwewebhu ezandleni zakho xa uyidibanisa newebhusayithi yakho. Umgangatho ophezulu ngaphandle kwamathandabuzo.
Imenyu esecaleni esekwe kwi izikhombisi ezibekwe kwicala lasekhohlo. Singacofa kwi icon yehamburger ukuvula ipaneli esecaleni okanye ucofe icandelo ngalinye. Inezaziso ezimibalabala ukuze le menyu esecaleni kwi-CSS ingasweli nto.
Ulawulo lwebar esecaleni
Le menyu esecaleni inezinye ii icon ezinemibala ukuze zande xa sihamba ngaphezulu kwelinye lamacandelo. Imenyu kwi-HTML kunye ne-CSS yokufakwa ngokukhawuleza kwiwebhusayithi entsha oyenzela umthengi.
Le menyu esecaleni kunye ibar yokuhamba okanye i-navbar yenziwe kwi-CSS. Singacofa kwi icon yehamburger ukwandisa zonke iinketho kwibar yokukhangela ephezulu, okanye shiya isikhombisi semouse kwicandelo ngalinye. Kugqityiwe kwaye kwahlukile ngokungafaniyo.
Imenyu esecaleni emfusa engabonakali kakhulu ngenxa yokuba umile kunye nemenyu ebanzi esecaleni ethatha uninzi lwayo yonke indawo eseleyo kwicala lasekhohlo lewebhusayithi yakho.
Izixhobo ezisecaleni zokuhamba ngesixhobo
Icocekileyo yeCSS Fly
Ibar esecaleni Imenyu Hover
Imenyu esecaleni eboniswa kwaye iboniswe kwaye oko kukuthi icwangciswe kakuhle kwi-CSS. Ilula ekukhulelweni kwayo, kodwa ngesiphumo esihle sokuba noyilo oluhle ngaphandle kwempumelelo enkulu. Ngenye yeemenyu zecala ezikhoyo kodwa azikho. Yintoni enokudingeka.
Sikushiya ne olu olunye uluhlu lweCSS yantoni qhubeka ujonge inqanaba Uyilo lwewebhu yangoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Bugcisa » CSS » 9 iimenyu zebarbar esecaleni zeCSS ongenakuphosa
Isibonelelo esingenakuphikwa: Iifoto zombhalo weFotohop ngesaphulelo sama-90%